ENCODYA: puzzle adventure vhidhiyo mutambo weLinux | Linux Vakapindwa muropa
ENODY Yaive imwe yezvakanyanya kutarisirwa kuburitswa kweiyi 2021. Iye zvino unogona kuwana iri rakaderedzwa zita rekushambadzira reLinux, Mac uye Windows mapuratifomu. Zvese nekutenda kune rakanaka basa revagadziri kuChaosmonger Studio uye mupepeti Assemble Varaidzo. Uye zvakare, iwe unayo iyo pane ese maviri Steam uye GOG mapuratifomu, ane 80% akanaka ongororo.
Ini ndatozvinongedza mune imwe chinyorwa nezve mamwe emavhidhiyo mazita emitambo vakawanda vanotarisirwa gore rino. Uye funga kuti 10% yemubereko unowanikwa kubva mukutengesa kwezita iri unoenda kune a rudo rwevana. Sangano rinoshanda kusimudzira kodzero dzevana uye kuenzana kwevasikana kutenderera pasirese.
ENCODYA inoteera masitayera emamwe mazita akabudirira kwazvo kubva kare, akadai seZuva reTende, Monkey Island, nezvimwe. Uye zvakare, inosanganisira yakanaka muyero we dystopian cyberpunk izvo zvakanyanya kuda kufarira mazuva ano. Zvese zvekurarama zviitiko neiri robhoti rakanzi SAM-53 paunenge uchifamba mumigwagwa yeNeo-Berlin isina kujairika pamwe naTina kuyedza kuponesa mamiriro akaoma eguta.
Pakati pe zvakasarudzika maficha ye ENCODYA ndeaya:
Une pamunwe wako guta rakakura kwazvo rinonzi Neo-Berlin ine zvinhu zvakawanda zvekuita, iine nzvimbo dzinopfuura zana dzakasarudzika.
Nakidzwa neguta uye gadzirisa mapuzzle anogadzirwa kuti uzviise iwe pamuedzo.
Pamwe naTina uye SAM-53, iwe unowana zvakare yakakosha yevatambi vakasiyana uye vechokwadi mavara, vese vanhu nemarobhoti. Nema dialogues ane angangoita 4000 mitsara.
Iwe unofanirwa kuisa pfungwa dzako dzese, nekuti uchafanirwa kungwarira kune zvese zvidiki diki, mazai eIsita uye zvimwe zvinoshamisa zvinokumirira.
Kana iwe uchida izvo iwe zvawakaverenga, unogona kuwana zvitoro zvataurwa pamusoro uye unakirwe nemusoro uyu ne 20% kuderedzwa haigare kwenguva refu. Saka, mhanya kutora iyo yakajairwa vhezheni kana imwe yakasarudzika vhezheni inonzi Sevha iyo World Edition izvo zvinodhura zvakanyanya, asi zvine zvakawanda zvirimo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » ENCODYA: puzzle adventure vhidhiyo mutambo weLinux